Japon " Journey-Assist - Mahaliana any Japon. Kolontsaina, laisoa ...
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Japana
Fantaro an'i Japon
Japon dia harena sarobidy amin'ny exoticism mahafinaritra. Betsaka ny zavatra mahaliana eto: Tokyo maoderina maoderina, faritany mareva-doko, tampon-dranomandry, voninkazo serizy, morontsiraka ao Okinawa, tsangambaton'ny Shinto taloha.
Any Japon, ny fomban-drazana dia mifangaro tanteraka amin'ny maoderina. Akaikin'ny pagoda taloha sy ny vavahadin-tsain'ny fanahy no ahafahan'ny olona mahita tranokala misy fitaratra mirakitra fitaratra, kintana dimy ", spaoro ahazoana aina, fandroana japoney" ofuro ". Io fifangaroana manavanana ny lova atsinanana sy ny fandrosoana tandrefana io no mahasarika mpizahatany Japon.
Ho fanampin'ny rivo-piainana manokana, misy maritrano am-boalohany, aseho, indrindra, ny "Golden Pavilion" malaza eran-tany, ny lapa amperora, tempoly maro be taloha. Ny ankizy dia liana amin'ny voly fialamboly toy ny Disneyland sy Universal.
Ny mpizahatany tonga any Japon dia samy hafa be, nefa matetika manankarena. Matetika ireo olona ireo dia efa nitsidika firenena maro, sy solontenan'ny orinasa.
Ny fatiantoka lehibe any Japon ho an'ny mpandeha dia ny taha ambony amin'ny vidiny, na dia tsy misy vanim-potoana "tsy fizahan-tany" toa izany aza. Na izany aza, betsaka ny manintona sy fialamboly eto amin'ity firenena ity.
Ny toeran'ny jeografika, ny mamaritra ny politikam-panjakana, ary ny tantara manankarena ao Japana dia nahatonga azy hitokana any amin'ny firenen-kafa. Amin'izany lafiny izany, ny kolontsain'i Japana, sahala amin'ny fomba amam-panao, aesthetics, dia naneho endrika mampiavaka azy amin'ny firenena eran-tany.
Horohoron-tany sy tsunami tamin'ny tantara japoney dia taratry ny fankalazana manokana ny toetran'ny Japoney amin'ny zavamananaina. Izay hita taratra indrindra amin'ny toe-tsaina sy ny fahaiza-mamorona.
Ny fiarahamonin'i Japon dia miavaka amin'ny fahatsapana miharihary fa fananana sokajy sosialy, toy ny - Fianakaviana, fiaraha-miasa, vondrona mpianatra ary ny hafa. Izy io koa dia manana taratra manaitra amin'ny fifandraisana ao anatin'ireo sokajy sy fiarahamonina iray manontolo.
Ny zava-dehibe indrindra any Japon dia ny fiheverana toy ny "trosa", "obligasiona", antsoina hoe "giri".
Tsara homarihina koa fa i Japana dia mandrisika ny fihetsika faran'izay voafehy indrindra miaraka amin'ny fihetsika kely indrindra sy fihetsika.
Toetr'andro any Japon
Japon (ankoatry ny Hokkaido) dia firenena manana toetrandro mahonon-doza. Eto, toy ny eto amin'ny firenentsika, dia misy vanim-potoana 4 miavaka.
Fararano tany Japon
Ririnina any japon
Lohataona tany Japon. Voninkazo Sakura
Fahavaratra any japon
Misy vanim-potoana orana 2 koa any Japon - fahavaratra sy fararano. Amin'ny ririnina, amin'ny faritany fisaka akaikin'ny morontsiraka, matetika ny mari-pana dia mihoatra ny aotra, mamirapiratra ny masoandro, ary maina ny rivotra.
Amin'ny lohataona, maniry aloha ny plum. Ny sakura japoney malaza dia nanomboka namony tamin'ny faran'ny volana martsa, ary nifarana tamin'ny tapaky ny volana aprily io fisehoan-javatra mahafinaritra io.
Ny fahavaratra dia manomboka amin'ny vanim-potoana orana, izay antsoin'ny Japoney hoe baiu. Maharitra 3 ka hatramin'ny 4 herinandro. Any atsimon'i Okinawa, manomboka ny baiu amin'ny folo taona faharoa amin'ny Mey, ary amin'ny faritra Tohoku (faritra avaratr'i Honshu) - amin'ny folo taona Jona, ary mifarana amin'ny folo taona Jona sy Jolay. Ny volana jolay no fiandohan'ny hafanan'ny fahavaratra. Rivotra be izy amin'ny fararano, fa ny mari-pana amin'ny rivotra dia mahazo aina (tsy mafana loatra ary tsy mangatsiaka loatra).
Fotoana mampidi-doza ny orana any Japon. Ny fanondrahana tena vokatry ny oram-be tsy maharitra dia tsy fahita firy.
Widget fiarahan'ny toetr'andro. Safidio ny sosona rehetra (rivotra, kotrokorana, orana, onja, sns) ary jereo fampahalalana mifandraika amin'izany.
Vola any Japon. Fifanakalozana fifanakalozana
Ny vola nasionaly dia ny yen. Amin'ny fomba ofisialy, mizara 1 yen ny 100 yen, raha ny tena izy, tsy nampiasaina hatry ny ela ny sen. Eo amin'ny fivezivezena dia misy naoty ao amin'ny antokom-pinoana 1, 000, 2000 ary 5 yen, ary koa vola madinika ao amin'ny antokom-pinoana 000, 10, 000, 1, 5 ary 10 yen. Mahagaga fa misy ihany koa ny naoty 50 yen, saingy tena tsy fahita firy ary saika tsy azo atao mihitsy ny mivezivezy.
The Yen. Vola any japon
Ora ora: manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 17 amin'ny faran'ny herinandro, manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 amin'ny asabotsy. Mikatona ny sabotsy sy amin'ny fetim-pirenena. Ireo mpivarotra ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Tokyo dia misokatra amin'ny ora.
Tsy toa ny firenena Asyria (sy tsy Azia) ihany, tsara kokoa any Japon ny mifanakalo vola amin'ny seranam-piaramanidina.
Misy fetrany ny trano fandraisam-bahiny - fifanakalozana tsy mihoatra ny 300 dolara amerikana isan'olona mandritra ny 1 andro. Any amin'ny banky, ity fomba fiasa ity dia sarotra amin'ny fahasarotana ataon'ny birao tsy ilaina. Mandritra izany fotoana izany, ny làlana any amin'ny seranam-piaramanidina dia mitovy amin'ny amin'ny toerana hafa (na ny fahasamihafana dia saika tsy hita).
Ny fifanakalozana saribakoly sy euros dia atakalo rehetra na aiza na aiza, fa ny vola any amin'ireo firenena tany USSR taloha tany Japon, indrisy, tsy ekena ho takalona na aiza na aiza. Tsy misy mpivarotra an-dalambe amin'ity firenena ity.
Ny carte de crédit dia ekena eto amin'ny saika fivarotana, trano fisakafoanana ary hotely.
Mpanova Vola Yen rate.
Ny kajy mpanova. Mifanaraka foana ny fampianarana.
Fiantsenana any Japon
Ny distrika fiantsenana lehibe any Tokyo dia Shinjuku sy Shibuya. Mahavariana ny habeny ny toeram-pivarotana japoney. Ny foibe fiantsenana sy fialamboly lehibe eto amin'ity firenena ity dia Seibu, Mitsukoshi, Isetan, Matsuya, Keio. Hita any Tokyo any amin'ny faritra Shinjuku sy Ginza izy ireo. Miasa amin'ny 8 ka hatramin'ny 21 izy ireo.
Ny souvenir japoney be mpitia indrindra dia ahitana ny saribakolin'i samurai, mpankafy loko, sary hosodoko hieroglyphic maro samihafa, akanjo nasionaly, ary entana seramika. Ireo mpankafy manga sy anime dia afaka mahita gazety, CD, boky, peta-drindrina ary t-shirt natokana ho an'ireo andiany sy dihy ireto.
Any Tokyo, ny firavaka, ary koa ny firavaka fitafiana, dia tokony hojerena. Tsy mora vidy kokoa noho izy ireo any Eropa izy ireo, saingy manamarina izany ny endrik'izy ireo. Ny vokatra voahangy dia azo vidiana ao amin'ny Tasaki Gallery. Misy kojakoja isan-karazany ny kojakoja atolotra eto. Sarotra ny mahita karazana satroka, fonon-tànana, fehiloha, ba kiraro sns sns toy izany any amin'ny toerana hafa rehetra. Ny Japoney amin'ny ankapobeny dia azo antsoina hoe mpampita fatratra fitaovana.
Tsena Kanazawa any Japana (Kanazawa)
Tsy toy ny any Azia sisa, any Japon, ny fanaovana varotra dia tsy atao amin'ny bazary sy fivarotana. Mpamorona lamaody eropeana maro no mamatsy ireo tahiry vaovao any Tokyo. Azonao atao koa ny mividy fahatsiarovana eny amin'ny seranam-piaramanidina - ny vidiny dia mitovy amin'ny any an-tanàna.
Ny sakafon'ny Japoney dia asongadina amin'ny fampielezana be ny vokatra be indrindra, raha tsy manisy sakafo.
Ny tena malaza amin'izany dia ny vary, ahidrano ary trondro. Ny lovia mahazatra dia "sushi" (tononina hoe "sushi" amin'ny teny rosiana; misy karazany 200 mahery izy ireo); "Sashimi" - dia trondro manta miendrika voamadinika, atolotra miaraka amin'ny saosy soja sy saosy wasabi horseradish masiaka; "Sukiyaki" (hen'omby natsatsika); lovia legioma isan-karazany; "Tofu" - soja curd. Amin'ny ankapobeny, ny soja dia vokatra iray tena malaza amin'ny sakafo Japoney.
Malaza any Japon ihany koa ny hen'omby "marbled" sy "sake", zava-pisotro misy alikaola vita amin'ny vary manana 16 hatramin'ny 19 degre. Ny lasopy japoney dia antsoina hoe miso. Ny ampahany ranon-javatra ao dia misy ron-trondro sy ny voankazo masirasira, ary ny ampahany mivaingana dia misy holatra, ahidrano, trondro, tofu ary hena. Sakafo trondro malaza dia tempura, izay sombin-trondro izay endasina amin'ny menaka mangotraka ao anaty adina. Ny kisoa dia ampiasaina hanamboarana "tonkatsu" - tapa-mofo ao anaty mofomamy. Avy amin'ny akoho - "yakitori" - kebab kely.
Any amin'ny tanàn-dehibe Japoney dia afaka mahita sakafo amoron-dalana be dia be ianao amin'ny vidiny mirary - ohatra, ny burger 300 yen sy milkshakes avy amin'ny 350 yen. Amin'ny trano fisakafoanana tsy lafo dia manomboka amin'ny 700 yen ny sakafo antoandron'ny orinasa. Sakafo hariva ho an'ny roa miaraka amina lalam-pihariana lehibe, ny alikaola sy salady amin'ny trano fisakafoanana antonony dia mitentina 4 yen.
Ny trano fisakafoanana mahaliana any Japon
Fitateram-bahoaka any Japon
Ny mandehandeha any Japon, matetika ny lamasinina sy ny fitaterana rano no ampiasaina.
Ny orinasan-dalamby nasionaly dia antsoina hoe Japan Rail. Ity orinasa ity dia manana ny zotra fiaran-dalamby Shinkansen sy ny tamba-jotra nasionaly. Ny fiaran-dalamby dia mizara ho karazany maro hafa - "tokkyu" (ny express haingana indrindra), "kyuko" (tsy dia haingana loatra), "kaisoku" (na dia fohy kokoa aza) ary "futsu" (fiaran-dalamby mahazatra). Ny gara lehibe tsirairay ao amin'ny faritry ny renivohitra dia miorina amin'ny tsipika boribory Yamanote. Ny fiaran-dalamby dia manana ny fahafaham-po rehetra - seza malefaka, milina fivarotana ho an'ny kafe sy zava-pisotro malefaka, trano fidiovana, fampisehoana amin'ny teny anglisy sy japoney.
Ny làlambe a bus dia mivoatra tsara any an-tanàna any Japon. Ny ankamaroan'ny bisy dia manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 21 hariva, ny sasany manomboka amin'ny 5:30 maraina ka hatramin'ny 23 alina. Ny fijanonana rehetra dia misy ny anarana fijanonana sy ny laharan'ny zotram-piaramanidina, fa ny ankamaroan'ny fijanonana dia amin'ny teny Japoney ihany. Ny fandoavana ny fivezivezena eto dia tanterahina alohan'ny fivoahana, fa tsy amin'ny fotoana hidirana amin'ny bus.
Misy lalamby any amin'ny tanàna 11 ao Japana: Tokyo, Osaka, Kyoto, Kobe, Yokohama, Fukuoka, Kawasaki, Hiroshima, Nagoya, Sendai, Naha.
Fiaran-dalamby ao Japon
Ny fivezivezin'ny lamasinina dia tanterahina elanelam-potoana dimy minitra manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 00:00. Ny faritry ny zotra dia voafaritra amin'ny faritry ny zotra ary manomboka amin'ny 120 ka hatramin'ny 1. Ny lamasinina dia miloko amin'ny loko isan-karazany, ny tsipika tsirairay dia samy manana ny lokony. Ireo kalesy dia manana seza volondavenona manokana ho an'ny sembana sy ny mpisotro ronono.
Mazava ho azy, misy ny fiarakaretsaka ao Japon, fa ny sandam-pandeha kosa lafo be. Ary koa, amin'ny alina (23 ka hatramin'ny 6) dia mitombo 30% izy ireo raha oharina amin'ny antoandro.
Ireo teratany amin'ny firenena rehetra tany USSR teo aloha dia tsy maintsy manana visa hiditra ao Japana. Tsy misy famerana mikasika ny fanafarana vola vahiny, fa 1 000 yen raha ilaina holazaina. Ny fanafarana maimaim-poana sy ny fanondranana paraky hatramin'ny sigara 000 grama, hatramin'ny sigara 500, hatramin'ny sigara 400, hatramin'ny hatramin'ny tavoahangy misy alikaola 100 ka hatramin'ny 3 ml tsirairay, hatramin'ny 750 ml ny menaka manitra, ary koa ny souvenir mitentina hatramin'ny 56 yen mety.
Ireo mpizahatany izay tsy mihoatra ny 6 volana izao dia manam-bola hamerenana ny vola laniana amin'ireo entana novidiana tany amin'ny fivarotana «Free Blue Tax Free» farafahakeliny 5000 yen.